Fiakarana akanjo tsy misy miketrona | Martech Zone
Fanakarana Suit-Free Wrinkle
Alarobia, Martsa 5, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Eto aho dia mipetraka ao amin'ny efitranon'ny hotely any Milwaukee, Wisconsin. Ny ekipanay dia manolotra orinasa iray eto ambony rahampitso ary hiverina any Indianapolis. Nividy akanjo vaovao aho tamin'ilay dia - amidy amina 70% eo ho eo io ary tsy zakako. Volontany sôkôla - saika mainty - ary mahazo aina. Tsy nividy palitao aho nandritra ny taona vitsivitsy, ka nitafy akanjo iray manontolo aho - anisan'izany ny kiraro slip-on.
Tao amin'ny seranam-piaramanidina Midway dia nifampiresaka tamina mpandeha hafa aho ary nolazaiko fa feno ao anaty kitapo entiko ny akanjoko. Tsy nino ilay tovolahy fa nanana palitao tao anaty kitapoko aho.
Raha ny marina dia nanana ny diako manontolo aho tamin'ny Messenger Bag - Niova akanjo, solosaina finday, magazine, sns .Ny slip-akanjo no nanaovako tamin'ny pataloha jeans ka hitako fa mpandehandeha mahafinaritra aho - hamonjy toerana fotsiny. Ary - misolelaka izy ireo mba hahafahako mandeha haingana amin'ny fiarovana. ny Case Logic Messenger Bag Manana komparty any aoriana misy padded aho izay mifanaraka tsara amin'ny MacBookPro, noho izany dia tsy mila manelingelina ny fonosako hiditra amin'ny solosaina finday aho!
Fony aho nipetraka tany Denver, nijery seho maraina aho izay nanehoan'ny tovolahy iray hanakodia ny palitao mba tsy ho ketrona. Matetika ny vahoaka dia mitondra kitapo akanjo lehibe na aforeto. Ny olana dia mivalona ny kitapo fitafiana ary miteraka ketrona ny famonosana azy. Raha ahodinao tsara ny palitao dia mihosotra tsy misy ketrona mihitsy ianao ary afaka mifanentana saika amin'ny zavatra rehetra.
Lehilahy lehibe aho - mba azonao an-tsaina hoe ohatrinona ny haben'ny palitao tokony miaraha miaritra amiko.
Atsofohy ny pataloha
Mba hanakodia ny patalohanao, dia alao antoka fa apetraka miaraka amin'ny pataloha eo anilany ny pataloha ary milahatra ny fonosana ka fisaka tanteraka ny pataloha. Manomboka amin'ny andilana, ahodino tsara ny pataloha mandra-pahatongan'ny fotoana mahamety azy ireo. Ataovy ao anaty kitaponao na ao anaty valizinao ao anaty zoro malemy izy ireo amin'izay tsy ho voahosotra.
Atsofohy ny palitaonao
Ny fanakodia ny palitao dia mila finesse kely kokoa. Te hiondrika moramora ianao fa tsy aforeto :), ny palitaoo mba hamerenanao ny soroka hiverina hikasika ny tenany. Amin'izany fomba izany dia misy miseho mivantana eo afovoan'ny lamosina ary toa voajanahary. Apetraho moramora eo ambanin'ny palitao ny tanany. Tsy te-hamoritra azy ireo toy ny miondrika fotsiny ianao. Ny faran'ny tanany dia tokony hipetraka eo ambanin'ny bokotra ambany amin'ny palitao.
Atombohy amin'ny soroka, ahodino ilay palitao, nefa aza hadino fa tsy miketrona azy ianao rehefa mandeha. Tokony hamorona horonan-taratasy matevina kokoa noho ny patalohanao izy io, fa hitazona tsara hatrany amin'ny dia! Aza atositosika ao anaty kitapo manodidina azy ny zavatra, fa apetraho ao fotsiny miaraka amina ba kiraro, akanjo ambany sns.
Manala ny akanjonao
Raha vantany vao tonga any amin'ny toerana halehanao ianao, dia aza hadino ny mamaha ilay kitapo, manala ny akanjony ary manantona azy. Tokony ho hitanao amin'ny toe-javatra tonga lafatra izany! Miala tsiny fa tsy manana sary mifanandrify aho - tena eny an-dalana tokoa aho ka tsy manapaka azy ny fakan-tsary finday iray.
NAOTY: Toa tsy dia nanam-bintana firy tamin'ny akanjo lava aho - Matetika aho no nandrehitra azy ireo tao amin'ny hotely.
Tags: erik Qualmanhatsikanafinday fampiharananamana mahafinaritrafanatsarana findaytranokala findaymaka tahakaporofoQualmanrevolisiona media sosialy
Mitsimbina fotoana handaniana dolara
Ny fanabeazana ve no valiny?
Mar 6, 2008 amin'ny 11: 43 AM
Hadinoy ireo torohevitra ireo momba ny fitorahana bilaogy tsara kokoa na widgets samihafa ho an'ny fampiharana WordPress, tena fahalalana tena ilaina izany! 🙂
Mar 6, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Doug, tiako ny lamaody sy ny palitao, ny anao toa jazzy, manao ahoana ny fety? Mahazo ny ankamaroan'ny entako vita aho, 6ft2in aho ary 260 lbs. Ny lehilahy iray amin'ny asanao dia tokony hanana akanjo tsy latsaky ny 3 ho an'ny orinasa, blazer manga, palitao lava, slacks fotsy ary mainty, ary akanjo lava amin'ny valahana ho an'ny daty mafana, ny zavatra horonana, mila resy lahatra aho
Mar 7, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Ny tsiro ny fitafiako dia mihoatra ny teti-bola hividianana azy ireo, JD! Ity akanjo ity dia tsy miala amin'ny talantalana - noho izany dia mila ataoko mpanjaitra iray izy io. Ny lava-tànana dia tokony ho iray santimetatra lava loatra, fa ny zavatra hafa rehetra dia tsara tarehy. Maniry aho fa ny landy dia manana firakofana landy, ny akanjako hafa dia manana an'io ary tsara kokoa ny mitafy noho ny pataloha jeans efa tonta.
Miasa ny horonana! Mampanantena aho 🙂
Mar 7, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
Ianao lehilahy miaramila taloha, ianao! Nianarako ity vatosoa famonosana ity rehefa tany CA aho nitsidika ny namako akaiky indrindra izay nijanona tao tamin'izany fotoana izany. Nofonosiko ny kitapoko handeha hody ary tena nahasosotra azy izany. Noraisiny ary natodiko ny akanjoko rehetra ary nifarana teo amin'ny ampahatelon'ny habaka nolazaiko io. Heveriko fa zavatra ara-tafika b / c ny hany olona fantatro fa toy izany no tao anaty tafika na nanana izany fitaomana izany teo amin'ny fiainany.
Na eo aza izany dia aforiko tamin'ny fanodinana ny zava-drehetra nanomboka teo. Tonga foana aho nefa tsy misy ketrona (izay ny bikan'ny fisiako) ary misy toerana malalaka ho an'ny sundries hafa. Akanjo akanjo, eny, eny, mazàna no tendren'ny vy.
Lahatsoratra tsara, ary fampahalalana tena sarobidy hananana amin'ny maha-orinasa anao.
Tsy maintsy mihantitra aho… tamin'ny androko dia 'aforitra & mitoby' io. Tsy nanakodia na inona na inona izahay, fa saika nisy kofehy ny akanjonay avy namoritra azy ireo! Mbola mamoritra lamba famaohana toy ny nataoko tao amin'ny Boot Camp ihany koa aho ary tsy mahazaka azy ireo mihorona hafa. Sad!
Mar 8, 2008 ao amin'ny 10: PM PM
Tsy maintsy manandrana manodina ilay palitao ary hahitana raha toa ka mandeha tsara kokoa noho ilay fonosana fitoriana ampiakariko izao. Fetsy manaraka - ny fahazoana lobaka ho any amin'izay halehako nefa tsy misy toa azy ireo natoriako tao. Misy torohevitra momba an'izany ve?
Jun 28, 2008 ao amin'ny 9: 42 PM
Mividy lobaka tsy misy vy any amin'ny tany aho ary manakodia azy. Raha misy ketrona na fehezana, dia ampy ny fikosehana vy. Raha fantatro fa hanao palitao aho dia tsy manelingelina ny manamboatra vy akory. Mivoaka ao anaty 30 minitra ireo sarona raha manao palitao palitao aho.
23 Jun 2009 amin'ny 1:21 AM
amin'ny fomba hafa - esory ny sandrin'ny palitao ao anatiny, ary tohizo mba hanana soroka iray ao anatiny ianao. Atsofohy amin'ny tananao ivelany ilay sandry hafa. Tokony hapetaka ny soroka. Atsofohy avy eo ny palitao.
Brooks ry zalahy maimaim-poana ketrona no tsara indrindra - tsy ketrona izy ireo.